I-WordPress: Incazelo ye-Dynamic Meta kokuthunyelwe ngakunye | Martech Zone
I-WordPress: Incazelo ye-Dynamic Meta kokuthunyelwe ngakunye
NgoMsombuluko, Julayi 2, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Unhlokweni wakho we-WordPress ozenzakalelayo uchaza incazelo eyodwa yanoma iliphi ikhasi lesayithi lakho, ngaphandle kwekhasi umuntu afike kulo evela enjini yokusesha. Ukuthi incazelo esenjinini yokusesha kungenzeka ingakuchazi ngempela okuthunyelwe okuku-blog kungahle kuholele ekunciphiseni kwabantu abancane kusixhumanisi sakho.
Angikaze ngicabange ngalokhu kuze kube yile mpelasonto lapho ngithola isibuyekezo esilandelayo sesayithi lami ngeBlogStorm:
Kuhle, kulula ukuxhumanisa isiheho! Zama ukwengeza izinkinobho zokubekisa komphakathi ezansi kokuthunyelwe kwakho nezinye izincazelo zemeta ezihlukile ekhasini ngalinye.
Ukwenza imali nge-blog enjengale kunzima, uma uzama konke UJohn Chow izamile lapho-ke uzobe usendleleni efanele.
Ngokucabanga okuthile nokuxhumanisa okuningi uzokwazi ukuthola izixhumanisi ezanele zokulinganisa amagama athile amahle (mhlawumbe usuvele). Uma usuklelise le migomo unganamathisela izixhumanisi ezihambisanayo ne-Adsense emakhasini bese uthola inzuzo.
Ukwenza ukubuyekezwa kwesiza sakho kuyinto enhle ngoba kuzovame ukukhomba inkinga ethile ngesayithi lakho ongayinaki. Kulokhu, kuyincazelo yami ye-meta tag yokuthunyelwe kwami ​​ngakunye. Izincazelo zeMeta zisetshenziswa izinjini zokusesha ukufaka incazelo emfushane yekhasi elibhalwe emiphumeleni. Njengoba abantu bezobona amakhasi ahlukene lapho bekufuna, kungani ungasebenzisi izincazelo zemeta ezahlukahlukene ekhasini lakho ngalinye?
Sengivele ngiguqule unhlokweni wami ukufaka amagama asemqoka ashukumisayo ethegi lami elingukhiye le-meta futhi kusizile ukuthuthukisa amazinga okunye kokuthunyelwe kwami. Ukufaka izincazelo ezahlukahlukene kungahle kungakhuphi ukuma kwami ​​kosesho, kepha njengoba iBlogStorm isho - kungaholela ekuxhumaneni okuningi namakhasi ami kusuka emiphumeleni yokusesha kwabantu.
Uma ikhasi elikusayithi lami liyikhasi elilodwa, njengalapho uchofoza kokuthunyelwe okukodwa, ufuna ukucashunwa kwekhasi. Ngifuna ukuthi ingcaphuno ibe ngamagama okuqala angama-20 kuye kwangama-25 wokuthunyelwe kepha ngidinga ukuhlunga noma iyiphi i-HTML yethu. Ngenhlanhla, WordPress inomsebenzi ozonginikeza lokho engikudingayo, bhekumuzi. Yize bekungadalelwanga lokhu kusetshenziswa, kuyindlela ehlakaniphile yokusebenzisa umkhawulo wegama nokuhlubula zonke izinto ze-HTML!
Ngingahle ngithathe lesi sinyathelo siqhubeke futhi ngisebenzise indlela ye- Ingcaphuno yokuzikhethela ngaphakathi kwe-WordPress ukufaka incazelo ye-meta, kepha okwamanje lesi isinqamuleli esihle esihle! (Uma usebenzisa le ndlela FUTHI ufaka i-Optional Excerpt, izosebenzisa leyo ngcaphuno yencazelo ye-Meta).
Lo msebenzi udinga ukuthi uwubize ngaphakathi kwe-Loop, ngakho-ke kukhona ubunzima kuwo:
QAPHELA: Qiniseka ukuthi ushintsha “Incazelo yami ezenzakalelayo” nganoma yini onayo njengamanje noma ongayithanda njengenchazelo ye-meta yebhulogi yakho.
Lokho okwenziwa yile khodi kunikeza incazelo ye-meta ezenzakalelayo yebhulogi yakho noma yikuphi kodwa ekhasini elilodwa lePosi, lapho-ke kuthatha amagama angama-20 okuqala bese kukhishwa yonke i-HTML kuyo. Ngizoqhubeka nokushuna kahle ikhodi (ngisusa ama-linefeeds) nokufaka 'uma isitatimende' uma kukhona i-Optional Excerpt. Hlala ubukele!
Tags: incazelo enamandla yemetaincazelo metaseoWordPress
Izikhangiso Zesixhumanisi Sombhalo Zilahla ama-Adsense eGoogle (kubhulogi lami)
Jul 2, 2007 ngo-4: 16 PM
Lokhu kuyamangalisa uDoug. Siyabonga ngokwabelana!
Jul 2, 2007 ngo-5: 10 PM
Omuhle uDoug, ngilangazelela ukubona le nqubekela phambili. Imayini iwumsebenzi omncane manje (ngiyacabanga), ngakho-ke ngiyajabula ukubona omunye umuntu enza umsebenzi onzima!
Jul 2, 2007 ngo-8: 25 PM
Inothi elilodwa - Ngivuselele okuthunyelwe ngoba bengicabanga ukuthi kufanele wenze okuthile okunengqondo uma othile esebenzisa i- "Optional Excerpt" kokuthunyelwe. Kodwa-ke, akudingeki - i-Optional Excerpt izoboniswa ngokuzenzakalela uma isetshenziswa… esinye isici esihle se-the_excerpt nemisebenzi ye_excerpt_rss.
Jul 3, 2007 ku-7: 10 AM
Hahaha…! Uqonde ukushaya uJohn Chow, akunjalo? ^^ Kuhle!
Jul 3, 2007 ku-7: 30 AM
Ukwenza ngaphezulu kwe- $ 10k ngenyanga kubhulogi yami kungaba kuhle impela! Kodwa-ke, uJohn ('umngani ongokoqobo' nomuntu engimhloniphayo ngendlela emangalisayo) utshala imali eningi ekunakeni. Usanda kungena enkingeni yiGoogle neTechnorati - lokhu kungamlimaza kancane ngenzuzo yakhe ngokuzayo.
Kepha ngiyabonga ukuthi abafana abanjengaye banama-cahoni okucindezela umkhawulo - UJohn wenza abafana nami bazi ukuthi ulayini ukuphi!
Jul 3, 2007 ngo-11: 15 PM
Ukulandela nje, ngithole i-All in One SEO Pack WordPress Plugin lokho kuzokwenzela lokhu!
Ngizobe ngidonsa enye yekhodi yami kuleli sonto bese ngisebenzisa le plugin kunalokho ukugcina izinto zihlanzekile. QAPHELA: Kutholwe ku Ibhulogi kaJohn Chow.
Jul 4, 2007 ku-11: 32 AM
Kuthiwani ngokufaka amagama wesigaba negama lebhulogi lokuthunyelwe ngakunye…. ngabe lokhu kuyathuthuka ezintweni ze-SEO? Ngicabanga kanjalo!
Jun 17, 2008 ku-2: 53 PM
Uma usebenzisa i-YAPB njengesixazululo sesithombe sakho, le khodi izodonsa isithombe sakho sokuhola ku-meta bese siyikhombisa ngaphezulu komzimba lapho ubuka ingaphambili.
Nov 27, 2008 ngo-2: 19 PM
Ngiyabonga ngekhodi, ngivele ngamiselela i- “My default description” nge